TONTOLO TONGA NY FAHAGAGANA VOLA - NY TONTOLO IZAO
Home » About us » Tsindrio ny Notes » TONGA DAHOLO IZAY REHETRA IZAY REHETRA
Ahoana ny fomba hiresahan'ny olona ny fandriam-pahalemana nefa ny fitaovam-piadiana efa maty dia miorina na manamarina ny fanavakavahana?
"Ahoana no ahafahantsika miresaka momba ny fandriampahalemana rehefa manorina fitaovam-piadiana vaovao mahery vaika?
Ahoana no fomba hiresahantsika fihavanana raha manamarina fihetsika manafintohina sasany miaraka amin'ny resaka fanavakavahana sy fankahalana? ...
Ny feon'ny fandriam-pahalemana dia feo fotsiny, raha tsy miorina amin'ny fahamarinana, raha tsy naorina mifanaraka amin'ny fahamarinana, raha tsy velomina sy vita amin'ny asa soa izany, ary raha tsy takatra amin'ny fahalalahana ”
(Papa Francis, kabary tao Hiroshima, Novambra 2019).
Tamin'ny fiandohan'ny taona, ny tenin'i Francis dia mitarika antsika hisaintsaina ny kristiana ny amin'ny fanolorantsika isan'andro amin'ny fananganana fandriampahalemana eto amin'izao tontolo iainantsika sy amin'ny zava-misy akaiky indrindra: Galicia.
Marina fa miaina amin'ny toerana iray manankery isika, eo imason'ny olona an-tapitrisany eto amin'izao tontolo izao. Na izany aza, io fiadanam-pihetsika hita maso io dia malefaka ary mety hijanona amin'ny fotoana rehetra.
Ny antsasaky ny Galisiana dia mivelona amin'ny tombontsoam-bahoaka: fisotroan-dronono sy fanampiana (Feon'ny Galatiana 26-11-2019).
Ny zava-nitranga vao haingana tany Chili, iray amin'ireo firenena manankarena indrindra any Amerika Atsimo, dia mampitandrina ny faharavan'ny fiaraha-monina antsoina hoe fiahiana.
Ny herisetra eo amin'ny lahy sy vavy izay tamin'ity taona ity dia mazàna indrindra amin'ny tanintsika, xenophobia, homophobia ary ny kabary feno fankahalana nataon'ny vondrona politika sasany, na dia eo ambany fiarovan'ny fivavahana Kristiana aza, dia famantarana fa tsy milamina ny filaminana.
Mba hahatratrarana ny tontolo iainana fandriam-pahalemana, dia ilaina ny hananana mpikambana rehetra ao amin'ny vondron'olona iray, amin'ny vahoaka iray, amin'ny tetikasan'ny fananganana fandriampahalemana manodidina azy ireo. Tsy mora ny mandresy ny fifanoherana, mampifanaraka ireo tombontsoa mifanohitra, ny rafitra fanavaozana tsy misy fanavakavahana.
Ny fototra dia fampianarana ho an'ny fandriam-pahalemana avy amin'ny fianakaviana ary indrindra avy any an-tsekoly, izay itrangan'ny trangan-tsarintany sy fampijaliana isan-taona.
Ny fampianarana ny ankizy sy ny ankizilahy amin'ny famahana olana tsy misy fankahalana ary tsy misy herisetra dia zavatra tsy ampoizina ihany koa amin'ny fampianarana.
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny tsy fahatomombanana amin'ny firenena maro dia ny fiheveran-drà misy azy
tafintohina eran'izao tontolo izao. Tsy ny fahasimban'ny tontolo iainana ihany no jerena fa ny fahantrana sy ny fanandevozana olona an-tapitrisany.
Ao ambadiky ny ady any Afrika dia misy tombontsoa ara-barotra lehibe, ary mazava ho azy ny varotra sy ny fanondranana fitaovam-piadiana. Tsy olon-kafa amin'ity tranga ity i Espaina. Ary na ny Firenena Mikambana aza, satria ny 80% amin'ny varotra fitaovam-piadiana dia avy amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny filankevitry ny fiarovana ny Firenena Mikambana.
Ny fandaniana an'izao tontolo izao amin'ny sifotra (2018) no avo indrindra tao anatin'ny 30 taona lasa (1,63 trillion euro).
Papa Francis dia nangataka avy amin'ny Firenena Mikambana fa hanjavona ny zon'ny mpamono olona amin'ny fahefana 5 momba ny fahefana XNUMX.
Tokony hifantoka amin'ny fanjifana tompon'andraikitra sy mahonon-tena isika, hanafoana ny tsy ilaina, ankasitrahana ny varotra ekolojia sy angovo maharitra. Amin'izany fomba izany no hanajanonantsika ny fanimbana ny planeta sy ny herisetra ateraky ny famokarana bibidia any amin'ny firenena maro.
Ny Synodan'ny Amazon farany teo, izay natao tamin'ny volana Oktobra lasa teo tany Roma, dia nanao politika vaovao miaro ny faritany voarahona sy ny mponina ao aminy.
Noho ny finoantsika an'i Jesosy manafaka an'i Jesoa dia tsy afaka manakana ny ady isika amin'ity ezaka ity hamonjy ny Fahariana.
NY Tontolo IREO DIDIKA FOTSIKA POLA PEZ ARY TSY VONDRONA
Tamin'ny 2 Oktobra 2019, nanomboka ny 2 martsa maneran-tany ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandriam-pahalemana tao Madrid, izay mikatsaka ny fampifangaroana manerantany ny ezaka ataon'ireo vondrom-piarahamonina samihafa sy ny hetsika ho tombontsoa amin'ireto tanjona manaraka ireto:
Tohanana ny Fifanarahana N fitaovam-piadiana niokleary ary hampiala ny mety hisian'ny loza maneran-tany amin'ny alalàn'ny fanomezana ny filan'ny olombelona.
Fongotra ny hanoanana avy eny amin'ny planeta.
Ovao ny Firenena Mikambana mba ho tonga Filan-kevitra Eran-tany ho an'ny fandriampahalemana.
Feno ny taratasy momba ny zon'olombelona amin'ny taratasy ho an'ny demokrasia maneran-tany.
Ampio ny drafitry ny fepetra hanoherana ny Supremacism ary misy fanavakavahana miorina amin'ny firazanana, firenena, firaisana na finoana.
Ny fiovan'ny toetr'andro.
Amporisiho ny fanaovana asa soa dia ny fifampiresahana sy firaisankina no hery manova ny hetra sy ny ady.
Hatramin'ny anio dia firenena 80 no nanao sonia ho famaranana ny fitaovam-piadiana niokleary, 33 ny ankatoaviny ary 17 no mijanona ho sonia. Nifarana tany Madrid ny 8 martsa 2020, tamin'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy.
Ankehitriny, samy manana ny tanany izy ireo hanatevin-daharana an'io toe-tsaina masina io izay mandeha manerana an'izao tontolo izao.
Tsy ampy ny fitiavana an'Andriamanitra ary tsy manompo sampy, tsy ampy intsony ny hamonoana, tsy mangalatra na tsy mijoro ho vavolombelona mandainga.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay dia nahita ny fomba nipoaka ny herisetra tany amin'ny toerana maro teto amin'izao tontolo izao: Nikaragoà, Bolivia, Venezoelà, Chili, Kolombia, Espana, France, Hong Kong ... Ny fanaingoana ny lalan'ny fifampiresahana sy fanalefahana dia asa maika mitaky antsika rehetra.
"Tao Nagasaki sy Hiroshima dia nivavaka aho dia nifanena tamin'ny olona vitsivitsy sy ny havan'ny niharam-boina ary namerimberiko ny fanamelohana mafy ny fitaovam-piadiana niokleary sy ny fihatsarambelatsihy miresaka momba ny fandriampahalemana, fananganana ary fivarotana fitaovam-piadiana (...) Misy firenena kristiana, firenena eoropeana. izay miresaka ny fandriam-pahalemana ary miaina amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana ”(Papa Francis)
DOKUMENTE MITOMPOANA 2019 /
Sonia: Coordinator de Crentes Galeg @ s